समाचार - उच्च लाभ होल्डिंग माछा खेल. खेल सफ्टवेयर अनुकूलित. उत्कृष्ट मंत्रिमंडलों.
प्रशासक द्वारा 2019-12-04 17:12:33
फिश गेम सागर किंग Shoot प्लस फिनिक्स एवेंजर्स माछाहरूको परिचय प्रणालीमा जानुहोस् - प्रणाली समायोजन - विषम स्तर. विषम स्तर प्यारामिटर हद या समायोजित समायोजन गर्नको लागि LOW को रूपमा सेट गर्न सकिन्छ. गुआंगजौ समय-स्पेस एनिमेसन प्रौद्योगिकी कं, लिमिटेड. माथि संग 20 बर्षको अनुभव अनुसन्धान र विकासमा केन्द्रित, उत्पादन र बिक्री. हामी उच्च होल्डिंगको साथ ओसन किंग फिश गेम श्रृंखला बनाउँछौं र अधिक नाफा लिन्छौं. हाम्रो उत्पादनहरु माछा शिकारी खेल मशीन समावेश छ, माछा भिडियो जुवा खेल मेशीन, माछा शिकारी जुवा खेल मेशीन, माछा हन्टर आर्केड खेल, स्लट खेल मेशीन, जुवा स्लट मशीनहरु，आदि. हामीलाई परामर्श गर्न स्वागत छ.
प्रशासक द्वारा 2019-08-22 17:08:08
हामी माछा मार्ने मेशीन र माछा मार्ने खेलहरूको उत्कृष्ट निर्माता हौं. हामीसँग हाम्रा विश्वव्यापी ग्राहकहरुलाई सन्तोषजनक उत्पादनहरु र सेवाहरु प्रदान गर्न को लागी व्यापार को एक सम्पत्ति छ. हाम्रा उत्पादनहरूमा फिशिंग मेशिनहरू समावेश छन्, माछा शिकार मेशिनहरु, माछा शूटिंग खेलहरु, शिकार र माछा मार्ने खेलहरू. हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वागत छ. माछा टेबल जुवा महासागर राजा3प्लस ड्रैगन लेडी ट्रेजरसको माछाको परिचय प्रणालीमा जानुहोस् - प्रणाली समायोजन - विषम स्तर. विषम स्तर प्यारामिटर हद या समायोजित समायोजन गर्नको लागि LOW को रूपमा सेट गर्न सकिन्छ. यदि तपाईं माछा शिकार गर्ने मेसिनको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने, माछा शूटिंग खेलहरु, माछा शिकारी आर्केड खेल, माछा शूटिंग गेमसेटक मेशीन, आदि, तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ.
प्रशासक द्वारा 2019-08-14 10:08:41
हामी माछा शिकारी आर्केड खेल उत्पादन गर्दछौं, माछा शूटिंग खेल, सागर किंग फिश आर्केड खेल, आदि. हामी संग छ 10 निर्माण मा वर्षको अनुभव. ग्राहक सन्तुष्टि हाम्रो खोज हो. माछा शूटिंग खेल महासागर3प्लस ब्ल्याकबार्डको फ्यूरीको माछा प्रणालीमा जानुहोस् - प्रणाली समायोजन - विषम स्तर. विषम स्तर प्यारामिटर हद या समायोजित समायोजन गर्नको लागि LOW को रूपमा सेट गर्न सकिन्छ. यदि तपाईं सागर किंग आर्केड खेलको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ, माछा शिकारी आर्केड खेल, आदि, तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ.
प्रशासक द्वारा 2019-07-24 17:07:28
हामी उत्कृष्ट चिनियाँ निर्माता हौं. हामी बहु प्रकारका सम्बन्धित उत्पादनहरू प्रदान गर्न सक्दछौं, जस्तै माछा मार्ने खेलहरू, माछा शिकार खेलहरू, माछा तालिका आर्केड खेल, माछा शिकारी खेल मेशीन, आदि. यदि तपाईं यी बारे अधिक जान्न चाहानुहुन्छ, हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वागत छ! सागर राजा3प्लस रेजिंग फायर TAS बाट एक नयाँ माछा शूटिंग खेल हो. सागर राजा3प्लस रेजिंग फायर महासागरको किंगमा सबैभन्दा नयाँ हो3प्लस श्रृंखला र यो २ ~ १० खेलाडीहरूको लागि कन्फिगर गर्न सकिन्छ. आर्केड फिश शूटिंग खेल मालिक: रेजिaging ड्र्यागन जब खेलाडीले रेजिंग ड्रैगन समाते , चेनलाई समात्न बाहिर फ्याँकिनेछ र यसले स्ट्रगल मोडमा प्रवेश गर्दछ. संघर्षको समयमा, ड्र्यागनको कारणले प्रत्येक प्रहार नेट जानेछ ...
प्रशासक द्वारा 2019-07-15 10:07:52
हामी माछा मार्ने खेल मेशीन उत्पादन गर्दछौं, माछा शूटिंग खेल मेशीन, माछा शिकारी आर्केड मेसिन, स्लट मेसिन, माछा शिकार खेलहरू, आदि. हामी संग छ 10 निर्माण मा वर्षको अनुभव. ग्राहक सन्तुष्टि हाम्रो खोज हो. माछा टेबल खेलहरू: सागर राजा3प्लस Blackbeard गरेको उतेजना: यो महासागरका राजामा भर्खरको हो3प्लस श्रृंखला. सागर राजा3प्लस ब्ल्याकबार्डको रोष २ ~ १० खेलाडीहरू र बिभिन्न फिशि Games गेम्स आर्केड टेबलको लागि कन्फिगर गर्न सकिन्छ. ब्ल्याकबार्डको घोस्ट शिप जब एक खेलाडीले ब्ल्याकबार्डको भूत शिपको झुण्ड शिप्स समात्छ, स्क्रिनमा सबै चीजहरू समात्न समातिन्छ।. Poseidon जब Poseidon पक्राउ गरिएको Poseidon को आक्रमण धेरै तरंगहरु प्लेयर सकेसम्म धेरै माछा समात्न मद्दत गर्दछ. सम्राट क्र्याब जब एक खेलाडी सम्राट समात्छ ...
प्रशासक द्वारा 2019-07-06 11:07:44
हामी माछा मार्ने खेल मेशिनहरूको एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता हो. यसको स्थापना पछि, कम्पनी अभिनव विकास अवधारणाको पालन गर्दैछ र माछा मार्ने मेशिनको उत्पादनमा केन्द्रित रहेको छ. कम्पनीले धेरै वर्षको अनुभवको साथ फिसि machine मेशिन पेशेवर उत्पादन प्रतिभाहरूको समूह भेला गरेको छ, र ग्राहकहरुलाई उत्तम उत्पादन गुण र बिक्री पछि सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ. हामीसँग हाम्रा ग्राहकहरु र साझेदारहरु को विशेषज्ञता प्रदान गर्ने क्षमता छ, समाधान र बहु ​​क्षेत्रहरूमा सेवाहरू. को भागहरु 8 खेलाडीहरू सागर किंग फिश गेम मेशिन समावेश गर्दछ: 1. गेम किट्स स्थिरता प्रोग्राम पीसीबी मुख्य बोर्ड. कनेक्टर उपलब्ध विकल्पहरू: वीजीए, DVI, HDMI. विरोधी- Cheater म / हे बोर्ड. बौद्धिक विकोडक 2. अपरेटि system प्रणाली आईसीटी बिल स्वीकारकर्ताले अमेरिकी डलरका लागि काम गर्दछ 1-100, अन्य प्रकार ...
प्रशासक द्वारा 2019-07-03 18:07:32
मा 1895, चार्ली फे र Jzplay Com पहिलो वाणिज्यिक स्लट मेसिन आविष्कार. यो भित्र तीन रीलहरू बाट बनेको छ, एउटा सिक्का संचालित स्लट, र कास्ट फलाम जसले मसिनलाई बाहिर घुमाउँछ. स्लट मेसिनहरू चाँडै नै बारहरूको मुख्य आधार बन्न गयो, क्यासिनो र धेरै फुटकर स्टोरहरू. धेरै मानिसहरूलाई यस जादुई मेसिनमा ठूलो चासो हुन्छ जसले मानिसहरूलाई रातभर धनी बनाउँदछ. चाँडै मेसिन सामान्यतया खुला छ. प्रविधि प्रगति रूपमा, यो विभिन्न मोडेल को एक किसिम मा विकसित भएको छ. स्लट मेसिन एक प्रकारको मेशिन हो जुन परिवर्तनसँग जुवा खेल्दछ. यो नाम राखिएको छ किनकि यसमा बाघ चिप छ. स्लट मेसिनसँग तीनवटा गिलास फ्रेमहरू छन् जुन बिभिन्न स्वरूपहरू छन्. सिक्का तानिए पछि, रड सुरु हुनेछ ...
प्रशासक द्वारा 2019-07-02 16:07:05
हामी उत्कृष्ट चिनियाँ निर्माता हौं. हामीसंग ब्यापारको अनुभव छ. हामी संसारभरका हाम्रा ग्राहकहरुलाई सन्तोषजनक उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्दछौं. हाम्रो उत्पादनहरू माछा खेल तालिका जुवा मेशिनहरू समावेश गर्दछ, माछा आर्केड खेल , माछा मार्ने खेल मेशीन, आदि. हामीलाई सम्पर्क गर्न स्वागत छ. शीर्ष फिशिंग मेशिनको प्रकार: 1. सब भन्दा पुरानो मेकानिकल प्लेटिनम मेशिन प्लेटिनम मेसिन दुई प्रकारमा विभाजित छ, एउटा स्ट्रिप प्रकारको प्लेटिनम मेशिन हो, र यसको स्विच अन र स्ट्रिप स्ट्रिप प्रकारको फलामले उत्पादन गरेको चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा नियन्त्रण गरिन्छ. अन्य EI वा EE लोहा कोर बाट बनेको छ, प्लस रिले नियन्त्रणमा स्विचमा बनाइएको, पछिल्लो चरण ट्रान्सफार्मरको प्रत्यक्ष आउटपुट हो. 2. इलेक्ट्रोनिक प्लेटिनम मेशीन: इलेक्ट्रोनिक प्लेटिनम ...
प्रशासक द्वारा 2019-06-29 11:06:58
माछा मार्ने मेशीन बजार मा एक उत्तम खेल कन्सोल हो. खेलले चार व्यक्तिको मेशिन र छ व्यक्तिको मेशिन प्रयोग गर्दछ धेरै व्यक्तिको लागि एकै समयमा खेल्न. खेलाडीहरू विभिन्न मोडहरूमा खेल्न सक्छन्, र चित्रमा विभिन्न प्रकार र र colors्गको माछाको एक किसिम जीत्न फिशिंग क्यानन सुरु गर्नुहोस्. खेलको क्रममा, साधारण माछा मार्ने स्कोरको अतिरिक्त, त्यहाँ साना लि of्कहरू बिभिन्न किसिमका छन् सुपर सुपर हतियारहरू, माछा एर्रे, मोती बक्सहरू, सुपर पुरस्कार, आदि, खेलाडीको तंत्रिका उत्तेजित गर्न, खेलाडीहरूलाई अधिक रमाईलो र अधिक आश्चर्यको आनन्द लिन मद्दत गर्दै. माछा मार्ने यन्त्रको सुविधाहरू： 1. उच्च शक्ति, उच्च वर्तमान, उच्च दक्षता र ऊर्जा बचत. 2. होईन ...
प्रशासक द्वारा 2019-03-04 15:03:45